» हिम्मत र तागत छ भने सरकार ढालेर देखाउ, घर भित्र बसेर उफ्रिने होइन!पर्यटन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई ,ताली या गाली? हिम्मत र तागत छ भने सरकार ढालेर देखाउ, घर भित्र बसेर उफ्रिने होइन!पर्यटन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई ,ताली या गाली? – हाम्रो खबर
हिम्मत र तागत छ भने सरकार ढालेर देखाउ, घर भित्र बसेर उफ्रिने होइन!पर्यटन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई ,ताली या गाली?
2020, November 7th, Saturday
admin 691 Views
ताप्लेजुङ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव काल्पनिक कुरामात्रै भएको बताएका छन् । पार्टी नेतृत्वबीच केन्द्रमा विवाद चलिरहँदा गृहजिल्ला ताप्लेजुङमा एक साता बसाइका लागि आएका मन्त्री भट्टराईले पार्टी नफुट्ने दाबी पनि गरे ।
नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास मूलत: विभाजनको इतिहास छ,’ भट्टराईले थपे, ‘पछिल्लो समय त्यो बद्लिएको छ विभाजन सजिलो कुरा हो एकता बडो कठिन कुरा हो । कठिन भए पनि राष्ट्रको आवश्यकताले त्यो कठिन बाटो हिँड्नै पर्छ ।’ एकताको बाटो सुरुआत गर्दा पार्टीलाई जहाँ पुर्‍याउने भनिएको थियो त्यहाँ पुर्‍याउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक गर्ने पार्टी भएकाले फर्कने पुल भत्किसकेकाले अगाडिको बाटोमा समस्या आए हल गर्दैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अलिकति बृहत् सहमति कायम गर्दै जानुपर्छ, उनले भने, ‘एउटै मान्छे सधैं अध्यक्ष हुँदैन उसले छोड्नुपर्छ तर एउटा प्रकृयाबाट ।
कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक विधिबाटै बनेको पार्टी भएकाले नयाँ अध्यक्ष पनि विधि, पद्धतिबाट आउनु पर्ने उनले बताए । ‘नयाँ नेतृत्व आउन पनि विधि पद्धतिबाट आउनु पर्छ, भएको अध्यक्षले पनि विधि, विधान, पद्धतिबाट पार्टी चलाउनु पर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यो भन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैन ।’
“लाखौ भ्रष्टाचार गरेको, आरोपमा एमाले,अध्यक्षलाई गाऊले मिलेर कालोमोसो, दलिदिएका छन।”
“ओमिक्रोन पछि भारतमा!फेरी कोभिडको अर्को नयाँ भेरिएन्टका संक्रमित, भेटिए, के छन् लक्षण ?
“बच्चालाई जन्म दिने! बित्तिकै संसार छोडिन, आमाले, बच्चालाई काखमा, लिएर कलेज,पढाउन जान्छन् बुवा”
“एमालेको चुनाव, चिन्ह सूर्य, नरहने”
“पाथिभरा माताले सबैको, मनोकामना पुरा गरुन, माघ ११ गते मंगलबार, आज तपाईको, भाग्य कस्तो छ, हेर्नुहोस राशिफल”
“ज्ञानेन्द्र शाहीले, योगेश भट्टराईलाई यस कारण भने ‘खुङखार, अपराधी’
“ओलिको यो एउटै बोलिले, झस्कियो गठबन्धन, एमाले कार्यकर्ता,उत्साहित !
“नेताहरु,लाई ज्ञानेन्द्र शाहीको झटारो, चुनाव होईन, ‘लुँडो’ खेलौं”
“दु:खद :अष्ट्रेलियाको, सिड्नीमा फेरी अर्की एक नेपाली युवती मृ’त भेटिइन्,
“राज्यले किन देख्दैन, उपल्लो, डोल्पाको दुःख ?
“थप १० हजार ३ सय १९ जनामा, कोरोना पुष्टि, काठमाण्डौ, उपत्यकामा, झन्डै ५३ हजार सक्रिय सङ्क्रमित”
“संरचना निर्माण क्रममा लापरबाही गर्दा,अन्ततः त्यही नाली, गैंडाका लागि ‘पासो’ बन्न पुग्यो”
“अचम्मका मानिस “विमान,को पांग्रामै, बसेर ११, घन्टा यात्रा,
“एमाले, पत्तासाफ हुने, भएपछि राप्रपा, र विवेकशील, गुहार्दै ओली !”
“६ महिनामै ४२ अर्ब रुपैयाँ,को खाद्यान्न, भित्रियो, साढे ३४ अर्बको, तरकारी, र फलफूल आयात”
( 2022, January 25th, Tuesday)